Njikọ ihe ọiceụiceụ, Ọchịchị n'Sitentanet na Eziokwu
Ọtụtụ ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ na-elekwasị anya oge dị ukwuu na ibe ha, igodo, na ibe ndị ọzọ. Imirikiti n'ime ha na-agbasi ike, na ahịa ahịa na-enweghị isi na ibe nke ọ na-enweghị onye na-agụ - mana ha ka na-ahụ na ha nọ ebe ahụ. Ndị na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ na-anọdụ ala ma mepee saịtị ahụ na nnukwu ndị isi n'uche nke yiri nke a:
Ha nwere olile anya na 'njikọ ihe ọ juiceụ juiceụ' sitere n'ụzọ kachasị mkpa na ndị isi gaa na nke kachasị mkpa. Ma, ọ bụghị otú ahụ ka ọ na-eme mgbe niile.
Dika Google choputara saiti gi ma gi na njikọta achoputara ihe ahu banyere ihe gi, Google bidoro itughari nke ya.
May nwere ike ịnwe otu post nke kachasị nke ọma maka mkpụrụokwu aha akọwapụtara, ma nwee njikọ njikọ ya, na-ebugharị mkpa nke ibe na saịtị gị na Google. "Njikọ ihe ọ juiceụ juiceụ ihe ọ ”ụ ”ụ" nwere ike si na blọọgụ gaa na otu, site na otu ụdị gaa na peeji nke ụlọ karịa nke ọzọ.
N'ezie, n'eziokwu, ọ bụghị ndị isi dị mkpa dị ka ụzọ nke onye ọbịa na-eleta web gị.
Akwụkwọ ọ bụla bụ ibe obibi ma ị kwesịrị ịgba ume ma kwadebe na ha ga-abụ peeji ntinye na saịtị gị yana na ị nwere ụzọ dị irè maka itinye aka - ma ọ bụ site na mpempe akwụkwọ ịkpọtụrụ ma ọ bụ site na ịmepe oku iji rụọ ọrụ .
O siri ike ịghọta nke ahụ naanị n'ihi ị chee na ị mebere usoro ndị isi dị mkpa na nke na-elekwasị anya ebe ịchọrọ ka ọ bụrụ, ọ pụtaghị na otu esi achọpụta saịtị gị ma jiri ya rụọ ọrụ! Chepụta ya!
Tags: data b2bCokeTechnologyNdidimbipụta obodo zoominfo
Nchịkwa Ọrụ dị mfe na HiTask